भदौ १८ मा पूजा र अनमोलको भिडन्त होला ? « Mazzako Online
भदौ १८ मा पूजा र अनमोलको भिडन्त होला ?
अभिनेत्री पूजा शर्मा, अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र सोनाम तोप्देनको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म सम्हालिन्छ कहिले मनको छायांकन सकियो । २ बर्ष लगाएर विभिन्न चरणमा यो फिल्म खिचियो । सुदर्शन थापाले फिल्मको निर्देशन गरेका हुन् । दुबइमा पुगेर यो फिल्मको छायांकन सकिएको हो । दुबइमा फिल्मको छायांकन सकिएकै दिन निर्देशक थापा, अभिनेत्री पूजा शर्माले यसको प्रदर्शन मिति तय गरेका छन् ।
फिल्मलाई आउँदो बर्षको भदौ १८ गते रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ । तर, भदौ १८ मा तीजको अवसर पारेर फिल्म रिलिज गर्ने उद्घोष गर्दै गर्दा यसो फिल्मलाई सहज भने छैन । किनकी, यो मितिमा अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री सुहाना थापाको फिल्म ए मेरो हजुर ४ आउने पक्का भएको छ ।
इतिहास हेर्ने हो भने, अनमोलसँग रिलिज भएका फिल्म असफल छन् । ब्रेकअप, यात्रा यसका उदाहरण हुन् । यसमाथि, अनमोलको यो हिट सिरिज पनि हो । अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता अनमोल केसीले एकसाथ फिल्म खेलेका छैनन् । तर, अब उनीहरु एकसाथ फिल्म भिडाउने तयार छन् ।